घामको बिकिरणको खतरा र बच्ने तरिका - ज्ञानविज्ञान
घामको सोझो प्रभावले छाला रुखो हुने, क्यान्सर हुने वा आँखाको दृष्टि कमजोर बनाउन सक्छ ।
घामको सोझो रापबाट बच्ने कसरी त ?
– आफु बस्ने क्षेत्रको तापमान अनुसारको एसपिएफ हेरेर उपयुक्त सन प्रोटेक्सन क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्ता क्रिममा एसपिएफ उल्लेख गरिएको हुन्छ, जसले सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर भन्ने जनाउँछ ।
– छालामा सोझै क्रिम लगाउनु हुँदैन । पहिला मोश्चराइजर लगाउनु त्यसमाथिबाट सन प्रोटेक्सनको लेपन लगाउने ।
– घाममा निस्कनु २० मिनेटअघि नै सन प्रोटेक्सन क्रिम लगाउनुपर्छ । किनभने, सन क्रिममा रहेको इन्ग्रीडिएन्ट्सलाई सक्रिय हुनका लागि कम्तिमा २० मिनेट लाग्छ ।
– घामबाट आउनसाथ तुरुन्तै अनुहार धुनु हुँदैन । किनभने यसले तपाईको रक्तवहानी नलीलाई तापमान अनुकुल हुने मौका मिल्दैन ।
– बाहिरबाट आउनसाथ छालालाई कोठाको सामान्य तापमानमा आउन दिने । त्यसपछि पानी छर्किएर छाला सफा गर्ने । छाला धुनसाथ टोनर आवश्य लगाउनुपर्छ ।
– संभव भएसम्म गर्मीको मौसममा मध्यान्ह १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म घरबाहिर निस्कनु उपयुक्त हुँदैन । किनभने यस समयमा अत्याधिक गर्मी हुन्छ ।
– बाहिर हिँड्दा अनुहारमा माक्स लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
– सन प्रोटेक्सन क्रिमलाई धेरै रगडेर लगाउनु हुँदैन । साथै क्रिमलाई थोरै पनि लगाउनु हुँदैन, जसले छालालाई सुरक्षा प्रदान गर्दैैन
Don't Miss it हेपाटाइटिस रोग के हो ? लक्षणहरु र उपचार
Up Next शरीरको कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ?